यति बेला कोभिड–१९ महामारीबाट विश्व समुदाय नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ । दैनिक रूपमा संक्रमित र यसबाट मृत्य हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन नेपालका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकार र सम्बद्ध निकायले यसमा सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्, जसमा निजीक्षेत्रका केही अस्पतालले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । ललितपुरको बी एन्ड बी र बनेपाको एचआरडीसी यसका उदाहरण हुन् ।
बी एण्ड बी एक जनरल हस्पिटल हो, जहाँ सबैजसो रोग एवं स्वास्थ्य समस्याको उपचार गरिन्छ । यस्तै अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पुनःस्थापन केन्द्र तथा अस्पताल (एचआरडीसी) खासगरी आर्थिक रूपमा कमजोर अपांगता भएका बालबालिकाको सेवा उपचारमा केन्द्रित छ । एचआरडीसी एक च्यारिटी संस्था हो । यस अस्पतालमा बी एण्ड बी अस्पतालबाट विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सेवा दिने गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।
यी दुवै अस्पतालले नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका कोरोना सम्बन्धी निर्देशनहरू पालना गरेको पाइएको छ । बी एण्ड बी हस्पिटललाई एक स्याटेलाइट हस्पिटलको रूपमा कोभिड–१९ उपचारका लागि चयन गरिएको छ । यहाँ सुरक्षा मापदण्ड र निर्देशनहरू पालना गर्न एक कोभिड टिम नै खडा गरिएको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार यहाँ प्रवेश गर्नासाथ ज्वरो जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र पहिला फिजियोथेरापी विभाग भएको प्रांगणमा आइसोलेसन बेडहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई पनि कोभिडका बिरामीको उचित स्याहार तथा उपचार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रशिक्षण/निर्देशन प्रदान गरिएको छ ।
जब नेपालमा पनि कोभिड महामारी फैलिँदै गयो, तब बी एण्ड बी हस्पिटल सामु दुई चुनौती देखापर्‍यो । पहिलो, यस अस्पतालमा नियमित रूपमा स्वास्थ्योपचारका लागि आउने बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणलाई कसरी निरन्तरता दिने र दोस्रो कोभिडका बिरामीको व्यवस्थापन÷उपचार कसरी गर्ने । यस्तो अवस्थामा अस्पताल व्यवस्थापनले तत्कालै बिरामी, कर्मचारीको प्रारम्भिक सुरक्षा र समुदायको सेवाका लागि आफ्नै एक पीसीआर मालेक्युर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । र, समयमै त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सफल पनि भयो । अहिले यही प्रयोगशालाबाट कोभिड संक्रमित र संक्रमित नभएका दुवै प्रकारका बिरामीलाई सुरक्षित ढंगले उपचार सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
यसैगरी, बनेपामा रहेको एचआरडीसी हस्पिटलमा पनि यस्तै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको व्यवस्थापनले जानकारी गराएको छ । उक्त अस्पतालमा स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय रूपमा क्वारेन्टाइन सुविधा प्रदान गरिएको छ भने आवश्यक सामान्य उपचार, शल्यक्रिया जस्ता चिकित्सकीय कार्य पनि सुचारु भइरहेको छ ।
केही समयअघि बी एण्ड बी हस्पिटल पुग्दा एकजना ७० वर्षीया महिलाको कम्मर भाँच्चिएर गम्भीर अवस्थामा त्यहाँ ल्याइएको थियो । कोरोना भाइरसले समस्या उत्पन्न गरिरहेको अवस्थामा कोभिड परीक्षण नगरी अन्य उपचार प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव नभएकाले पहिले उनको पीसीआर परीक्षण गराइयो । त्यसपछि आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरियो । यो शल्यक्रियामा जो सहभागी हुँदै थिए, उनीहरू महिलाको कोभिड परीक्षण पोजिटिभ नआओस् भन्नेमा थिए । तर, रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । अब उनीहरूसामु थप चुनौती देखियो । शल्यक्रिया गर्नैपर्ने थियो । यसैले कोभिड उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेर डा. विवेक बाँस्कोटाको टिमले शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो । शल्यक्रियापछि यस प्रकारको उपचारमा संलग्न हुने सबै चिकित्सक ५ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेको डा. बाँस्कोटाले बताए । त्यसपछि कोरोना नेगेटिभ देखिए मात्र उपचारमा निरन्तर सहभागी हुने, अन्यथा थप क्वारेन्टाइन÷आइसोलेसनमा बस्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
बी एण्ड बी हस्पिटलले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार समेत गर्नुपर्ने भएपछि हस्पिटलले संक्रमित र असंक्रमितको उपचारलाई बढी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ संरचना नै तयार पारेको व्यवस्थापनले बताएको छ । बितेको ८/९ महीना अवधिमा हस्पिटलमा नियमित सञ्चालन प्रक्रियामा ३० देखि ४० प्रतिशत कमी आएको व्यवस्थापनले बताएको छ । यद्यपि वर्तमानको जटिल परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हस्पिटल सञ्चालनमा परेको आर्थिक दबाबको सामना गर्र्दै सबै प्रकारका पीपीई सुट, अधिक प्रयोगमा आउने युनिटहरूको स्तरोन्नति, अलग्गै आईसीयूको स्थापना, चौबीसै घण्टा विशेषज्ञ सेवा आदि व्यवस्था गरेको छ ।
अस्पतालले आफूहरूलाई कोभिड–१९ का बिरामीको सेवामा खटिएबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गरिरहेको त्यहाँ कार्यरत एक स्टाफ नर्सले बताइन् । डा. विवेक बाँस्कोटाका अनुसार एचआरडीसी र बी एण्ड बी हस्पिटल दुवैमा गरेर करीब १ हजार जना कार्यरत छन् । हस्पिटलले सामना गरेको चर्को आर्थिक दबाबमा पनि हालसम्म कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाइएको दाबी उनले गरे ।
बी एण्ड बी हस्पिटलमा कोभिड–१९ को उपचारका लागि कोभिड संक्रमितकै लागि भनेर छुट्याइएको चार विशेष आईसीयूसहित २९ बेड छन् । यस्तै पीसीआर परीक्षण पूर्वका बिरामीका लागि ९ आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ । हालसम्म उक्त अस्पतालमा कार्यरत ९६ जना कर्मचारी र १६ जना डाक्टरमा समेत कोभिड पोजिटिभ देखापरेको व्यवस्थापनले बताएको छ । उनीहरू आइसोलेसनमा बसेर संक्रमणमुक्त भई हाल कार्यक्षेत्रमा सेवारत छन् । अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा प्रदान गरिरहेका कर्मचारीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको बताइएको छ । उनीहरूका लागि हस्पिटलले बीएमआई नर्सिङ कलेजमा क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । हस्पिटलले हालसम्म ९२ जना कोभिड संक्रमित बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ । ‘यो जटिल परिस्थितिमा जब कोही कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु हुन्छ, त्यसले दिने पीडा एकातिर त छँदै छ । मृतकको शव झोलाभित्र राखेर सरकारले खटाएका सैनिक जवानले मृतकको परिवार बिना अन्तिम संस्कारको लागि जानुपर्ने दृश्यले मन कुँडिन्छ,’ डा. बाँस्कोटाले भने, ‘यस्तो दृश्य देखिने दिनको चाँडै अन्त्य होस् ।’
पठनीय संस्मरण : यात्रा विदेशको चिन्ता स्वदेशको[२०७७ पौष, २९]
विशेष क्यामेराजडित ट्राफिक ‘सर्भिलेन्स भेइकल’ परिचालन[२०७७ पौष, २७]
त्रिवि एलुम्नाई एशोसिएशनको दोस्रो साधारणसभा सम्पन्न[२०७७ पौष, २३]
भलिबललाई पहिलो प्रेम मान्छिन् अरुणा[२०७७ पौष, ७]
पर्वतीय उडानमा यात्रुको आकर्षण बढ्यो[२०७७ पौष, ५]
२ अर्बभन्दा बढी खुद नाफा गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकको जगेडा कोष रकम भने घट्यो
विश्व प्रसिद्ध सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको सञ्चालन नाफा दुई अंकले वृद्धि
दोस्रो त्रैमासमा प्राइम कमर्सियल बैंकको नाफा १ अर्ब ८१ करोड ३३ लाखभन्दा बढी